-Google - omunye ethandwa kakhulu futhi kusebenziseka kalula izinjini, okuyinto ngokuya ayethanda abasebenzisi. Kodwa-ke futhi inkampani enkulu, okuyinto waziphatha ukuthuthukiswa kwezinsizakalo ahlukahlukene futhi izicelo ukusetshenziswa ukhululekile kakhulu futhi kujabulise ngaphandle kwe-inthanethi. Enye intuthuko lokuqala (emva search, ikhathalogu kanye, yebo, i-AdWords) kwaba yamathuluzi e-Google.
Uhlelo sidalwe futhi wanikela ukufakwa kule ethandwa kakhulu ngesikhathi (2000) lesipheqi se-Inthanethi Explorer. Yingaleso elula abasebenzisi, ngoba usesho esakhelwe e IE yayingekho, futhi kuyazuzisa abadali, ngoba kuyindlela enhle kakhulu ukukhuthaza anezele ezintsha. Kusukela ngaleso sikhathi, isikhathi esiningi isidlulile, yebo, izinguquko eziphawulekayo ezenzeke iphaneli.
Phakathi yezingxenye ethandwa kakhulu eziqukethe Google Toolbar, ungakwazi ukushayela esakhelwe search wesayithi, ukuhumusha ngokuzenzekelayo okuqukethwe, ukusikisela ngephutha amakheli, ukupela, pop-up blocker nokuningi. La mathuluzi ziwusizo ngempela futhi lula kakhulu umsebenzi umsebenzisi. Ngokuhamba kwesikhathi, abanye babo ngeminyaka IE. Empeleni, lesi kwaba isiphequluli kuphela lapho usesho lwe-Google kwaba akuzenzakaleli. Yingakho eGoogle kuyinto umphelelisi ebalulekile kuso.
Ezinye ezibuza ukuthi kukhona ezifana yamathuluzi e-Google ukuze Opera. Ayikho inguqulo okhethekile yasungulwa (ngaphezu IE) kuphela Firefox, kodwa hhayi ngendlela iyeke ngo-2011. Ngaphezu kwalokho, namuhla inkampani isekela ngokuzeleko futhi ikhuthaza-Chrome, ngokusho imiphumela yocwaningo ithandwa kakhulu. Kule ndaba, ibha yamathuluzi ye-Google okwamanje zisekelwa kuphela ukusebenza, kodwa hhayi olusha.
Manje zonke izici eGoogle eyakhelwe ku-Chrome. Uma usebenzisa le isiphequluli, wonke amathuluzi adingekayo kuwo. Nokho, uma unquma ukufaka ibha yamathuluzi e-IE-Google, kuzomele ufunde kabanzi mayelana nezici zayo. Nakhu-ke kuhlanganisa:
Instant - ngokufaka igama ubona amathiphu ngesimo izicelo ethandwa kakhulu (eziqala izinhlamvu ohambelana) ukuthi abasebenzisi ufuna. Ngakho, wena ungabhali ngokuphelele leligama / umusho uchaza.
-Google Bookmarks, okuyinto angavulwa kusuka kunoma iyiphi ikhompyutha (kwi-akhawunti yakho).
Ukuhumusha (ngokukhomba i-mouse noma ngokuzenzakalelayo ikhasi lonke).
Ukupela - amaphutha zigqanyisiwe abomvu futhi ubonisa ukhetho alungile ngesikhathi isikhombisi.
Ukugcwalisa Okuzenzakalelayo - ke aqede isidingo ukungena isikhathi ngasinye igama, igama lomsebenzisi, inombolo yocingo, kanye nokunye.
Inkinobho "+1" - ikuvumela ukuba wabelane ukwaziswa okuthakazelisayo nokuwusizo nabangani.
Izaziso ze-Google (uma umlayezo inkinobho entsha ehambisana naye egqanyisiwe abomvu).
Amasethingi ukuhlela yamathuluzi e-Google (ukususa noma wengeze amathuluzi, amalebula inkinobho, njll ..).
Ngokuvamile, lokhu kwalokho kuba ngempela elula futhi ewusizo. Nokho, namuhla abantu abaningi sebenzisa isiphequluli se-Chrome, okuyinto vele iqukethe wonke amasethingi. Futhi okwesibili, ukuklanywa minimalist namanye amasevisi we aluhlanganiswa panel ukuthi ubukeka kuhle okukhulu, hhayi kakhulu yesimanje futhi, ngezinye izikhathi, amabhuleki ukusebenza.
Kungani ungaqali nyangazonke? Isisu akusho ubuhlungu, ungaqali nyangazonke, yini okufanele uyenze? Kungani ungavezi nyangazonke?